Uzifumana phi iitemplates zasimahla zeWordPress? | Abadali be-Intanethi
UMary Rose | | Wordpress
Uphuhliso lweWebhu luguquka imihla ngemihla, njengoyilo lwetemplate yeWordPress. Ukuba ulapha kungenxa yokuba ujonge iitemplates zasimahla zeWordPress. Kwaye akukho, into yokuba i-template ikhululekile ayithethi ukuba imbi ngakumbi kunokuhlawula. Enye yeenzuzo zokuqala kukugcina kutyalo-mali lokuqala.
Ke, senze uluhlu lweewebhusayithi ezi-5 apho unokukhuphela khona i best free WordPress imixholo.
1 Iitemplates zamahhala ze-WordPress
1.4 Imixholo yangoku
Iitemplates zamahhala ze-WordPress
I-WordPress yi isoftware evulekile, yakhululwa ngo-2003, kunye ne injongo yokudala naluphi na uhlobo lwewebhusayithi. Kuyo, uya kufumana i-directory esemthethweni yee-WordPress themes. Ngokusebenzisa eli phepha lewebhu ukukhuphela iitemplates, ungazifaka ngokuthe ngqo kulawulo. Ke akunyanzelekanga ukuba ukhuphele isifaki. Imixholo ye-WordPress.org ihlaziywa rhoqo. ngokuzenzekelayo, isoftware ngokwayo iya kukuthumela isaziso malunga nohlaziyo olukhoyo.
itemplates ezininzi banomboniso wangaphambili ukuze ubone ukuba injani iwebhusayithi yonke kwaye ujikeleze kuyo. Ukongeza, kwitemplate nganye uya kufumana inkcazo emfutshane malunga nomxholo othethiweyo kunye neempawu zayo. Njengenguqulelo, uhlaziyo lwayo lokugqibela, ukufakwa okusebenzayo, inguqulo ye-WordPress kunye nenguqulo ye-PHP.
I-JustFreeWpThemes yinkampani yamazwe ngamazwe enikezela ngeemveliso kunye neenkonzo ezinxulumene noyilo lwewebhusayithi kunye nophuhliso. Ngokukhethekileyo kwiJoomla kunye neWordPress CMS. Baye basungula le projekthi ukuphucula i-WordPress theme directory, ngophendlo olungcono, ikhonkco ledemo yokwenyani, utshintsho, amaxwebhu, inkxaso, njl.
nayo, nikezela ngoluhlu lwezona zihloko zasimahla zeWordPress eziphononongwa liqela labo leengcali, bakunika i-URL yedemo epheleleyo kunye nefayile ye-DOC ngqo kunye nenkxaso.
Yiyo ilayibrari yetemplate enika inani elikhulu leenketho zomxholo we-WordPress. Yenziwe ngo-2008, ngenjongo yokuba yi-platform ye-intanethi yabasebenzisi abafuna ukudala iprojekthi yabo okanye ukuyila kwakhona. Awuyi kufumana imixholo emininzi yasimahla kule webhusayithi, kodwa kufuneka uhlale ukhumbula ukuba imixholo yasimahla eyinikezelayo iyahluka, ke uya kufumana amatsha nyanga zonke. Ziyimixholo yeprimiyamu yeWordPress onokuthi uyikhuphele simahla. Uya kuba nakho ukufikelela kwezinye zezona zihloko ze-WordPress ezilungileyo kwihlabathi.
Eli qonga le-intanethi lilula kwaye liyasebenza ukulisebenzisa, kuba Inezihluzi ezininzi ukwenza uphendlo olusekwe kwinto oyikhangelayo.
Le nkampani, emva kokusebenza iminyaka emininzi kunye nemixholo ye-WordPress, iqulunqe iimbono ezisebenzayo kunye nezingasebenziyo. Ke bagqibe ekubeni benze imixholo ngoyilo olunomtsalane nolusebenziseka lula. Ukubheja ngokulula. Imixholo yanamhlanje yasekwa ukuze abasebenzisi Umakhi we-WordPress walo naliphi na inqanaba lezakhono bangaphila amava apheleleyo kwiwebhusayithi yale mihla efana nale.
Ngokuyila imixholo enokhetho olulula lokuyihlela, inika abasebenzisi indawo yokuqalisa engenamthungo necacileyo yokuyisebenzisa. Banciphisa iinketho zesiko kwimisebenzi eyimfuneko. Yonke imixholo yabo ilula ukwenza ngokwezifiso kwaye inokudityaniswa nayo nayiphi na iplagi ye-WordPress. Uya kufumana imixholo enoyilo olulula kunye noluncinci. Unokukhetha kwinani elikhulu lemibala kunye neefonti kwiifonti zikaGoogle.
TemplateMonster yi kwimarike ye-intanethi apho unokuthenga yonke into oyifunayo ukwenza iwebhusayithi. Baninzi abaphuhlisi abazimeleyo abathengisa iimveliso zabo kule marike ukuze abanye abasebenzisi bakwazi ukwenza iiwebhusayithi zabo.
Uyilo kule webhusayithi luphuhliswe ngokukodwa kwi-WordPress. Ezi templates ziyakwazi ukwenzeka kwaye ziya kukunceda wenze okanye uhlaziye uyilo lwephepha lewebhu esele likho. Baneqoqo elikhulu leengqungquthela ze-WordPress zamahhala ngeenjongo ezahlukeneyo. Unokukhetha uyilo othanda kakhulu kwaye kuya kuthatha imizuzu embalwa ukuyikhuphela.
Ukwenza oku, njengoko kuchaziwe kwiwebhusayithi yabo, kufuneka wabelane ngephepha letemplate kwiinethiwekhi zentlalo. Inye into ekufuneka uyigcine engqondweni kukuba ezi templates zenzelwe iinjongo zemfundo, ke inkxaso kunye nohlaziyo zinikezelwa kuphela imixholo Premium. Ngokuphathelele iimpawu zezi templates sinokukhankanya oku kulandelayo:
Uyilo oluphendulayo: Iwebhusayithi oyikhethayo iya kulungelelanisa nasiphi na isisombululo sesikrini saso nasiphi na isixhobo esiphathwayo.
Ukuhambelana nesikhangeli sewebhu: awuyi kuba nexhala malunga nokuboniswa kwewebhusayithi yakho kwezinye izikhangeli. Utshintsho olwenzayo luya kuhlala lulungelelanisa imbonakalo kunye nokusebenza kuzo zonke iibhrawuza.
Ukhetho lwemixholo emininzi: ungatshintsha inkangeleko yomxholo owukhethayo kunye nokwenza ngokusesikweni i-typography, uphawu okanye ukukhangela.
Nali ikhonkco kwelinye inqaku apho uya kufumana ngakumbi Iitemplate ze-WordPress, kodwa ngoku, ihlawulwe. Mhlawumbi ithempleyithi oyikhangelayo akunyanzelekanga ukuba ibize kakhulu. Kukho iintlobo ngeentlobo zamaxabiso, kwaye ngokuqinisekileyo elinye liyalingana nohlahlo lwabiwo-mali lwakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Uyilo lwewebhu » Wordpress » Izakhelo zeWordPress zasimahla
Imbali yelogo yePepsi